Wed, Jul 8, 2020 at 12:43am
सुनको भाउ घट्यो, प्रति तोला कति छ मूल्य ?
असार ११, काठमाडौं । सुनको भाउ तोलाको ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ऐतिहासिक मूल्य कायम गरेको सुनको मूल्य बुधबार ६५ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मंगलबारको दिनको तुलनामा सुनको मूल्य प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँ घटेको छ । मंगलबार सुनको मूल्य ६५ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । सुनसँगै चाँदीको मूल्य समेत घटेको छ ।..
इटहरीमा ३ दिनसम्म चलेको ‘टाटा कार मेला’ सम्पन्न
इटहरी, ८ असार । टाटा मोटर्सको नेपालस्थित एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग र सिप्रदी ट्रेडिङ्ग को आधिकारीक बिक्रेता गोयल अटो प्रालिको सहकार्यमा आयोजित टाटा कार मेला इटहरीमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । उक्त अवसरमा टाटा मोटर्सको भर्खरै बजारमा आएको ‘टियागो जेडएक्स प्लस’ को लञ्च समेत गरिएको थियो । बिहान ११ः०० बेज देखि साँझ ७ः०० बजे सम्म सञ्चालन भएको उक्त मेला जम्मा ३..
आगामी मार्चमा नेपाल आउँदै एमभि अगस्टा सुपरवेलोस ८००, यस्तो छ मुल्य
असार ७, काठमाडौं। एमभि अगस्टा नेपालले अगस्टा सुपरवेलोस ८०० नेपालीबजारमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी मार्चत्रि यो बाइक नेपाल ल्याइसक्ने जनाएको छ । यो बाइक २०१ यूनिट पहिला नै अडर भइसकेको र बाँकी ९९ ओटामात्र रहेको छ । एमभि अगस्टा एउटा कन्सेप्ट बाइक हो । नयाँ अवतारका साथ बिशेष फिचरमा नेपाली बजारमा सार्वजनिक हुने बताइएको छ । एलईडि जिडिटल लाईट,..
नेपाली बजारमा भित्रिदै किया एसयूभी सेल्टोस, यस्तो छ मुल्य
असार ७, काठमाडौं । एकदिन अगाडी भारतिय बजारमा सार्वजनिक भएको किया एसयूभी सेल्टोस नेपालीबजारमा पनि भित्रने भएको छ । कियाले यो कार २०१८ को अटो एक्सपोमा एसपी कन्सेप्टको रुपमा प्रदर्शनी गरेको थियो ।साल्टोस नेपाली बजारमा आएपछि टाटा, हुन्डाई, जीपलगाएतका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ । यस्ता छन फिचर सेल्टोसे ८ इन्च एचयूडी र १०.२५ इन्च होरिजेन्टल्ली ओरिन्टेड टच स्क्रिन रहेको छ । इलेक्ट्रोनिक..
टोयोटाको नयाँ डिलर जनकपुरमा, आधिकारिक वितरक श्रेया अटोमोबाईल्स्
जनकपुर, ६ असार । विगत ५२ बर्षदेखि टोयोटाको नेपालको लागि एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता युनाईटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेटले आफ्ना डिलरहरुलाई नेपालैभरी फैलाउने क्रममा जनकपुरमा पनि आफ्नो डिलर बिस्तार गरेको छ । संचालनमा आएको केही समय बितिसकेता पनि श्रेया अटोमोबाईल्स डिलरको उद्घाटन भने विहिबार एक भव्य समारहोकाबीच जनकपुरमा सम्पन्न भयो । जनकपुरमा श्रेया अटोमोबाईल्स्ले बिगत केही महिनादेखि टोयोटाका गाडीहरु बिक्री गर्दै आईरहेको तथा हालसम्म त्यहाँबाट..
नगरपालिका जमानी, खानेपानी उपभोक्ता ऋणी ! १ हजार ८ सय परिवारलाई सुविधा
काभ्रेपलाञ्चोक, ५ असार । पाँचखाल नगरपालिका कार्यालयको जमानीमा स्थानीय सहकारीले चलनचल्तीभन्दा न्यूनतम ब्याजदरमा खानेपानी उपभोक्तालाई ऋण प्रवाह गर्न थालेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करीब एक हजार ८०० परिवारलाई सहकारीमा ऋणी बनाएर नगरमा सुनकोशी पाँचखाल बृहत् खानेपानी परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई ऋण दिलाएरै भए पनि योजनामा सहभागी गराउन नपा कार्यालय जमानी बसेर उपभोक्तालाई स्थानीय..
बिपी राजमार्गका होटलमा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी स्टिकर
सिन्धुली, ४ असार बिपी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुली सडकखण्डको चियाबारी, खुर्कोटका होटलमा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी स्टिकर टाँसिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले होटलमा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी स्टिकर टासेको हो । राजमार्ग भएर सवारी भित्रने र बाहिरिनेको सङ्ख्या बढेसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा होटल खुल्ने क्रम बढ्दै जाँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै खाद्य स्वच्छता स्टिकर टाँसिएको हो । स्टिकरमा थोरैले मात्र खाद्य स्वच्छतामा राम्रो..
काठमाडौँ ४ असार । आईएमई गु्रप अन्तर्गतको रेमिट्यान्स तथा डिजिलर भुक्तानी सेवा मा अब्बल आईएमईले नेपाल लोक स्टारको मुख्य प्रायोजन गरेको छ । एपिवान टेलिभिजनमा फागुन १६ गते देखि सुरु भएको यो रियालिटि सोको मुख्य प्रयोजनमा आईएमईले गरेको हो । आपन अडिसनबाट ३५० प्रतिस्पर्धीहरुलाई प्रदेश अनुसार सहभागी गराइएको थियो । यस कार्यक्रमको लागत करिब १० करोड रुपैया रहेको छ । नेपाली लोक स्टार..
असार ४, काठमाडौं । टाटाको कार मेला सुन्दर नगरी इटहरीमा शुरु हुने भएको छ । टाटा मोटर्सको नेपाल स्थित एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्गले र आधिकारीक बिक्रेता ग्लोबल अटो ट्रेडर्सको सहकार्यमा सुन्दर नगरी इटहरीमा यही असार ५, ६ र ७ गते कार मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार मेला सिप्रदी ट्रेडिङ्गको कार्यालय नजिकै ओसन पार्कमा..
​द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२ को टाइटल स्पोन्सरमा युनाइटेड सिमेन्ट्स
काठमाडाैं, असार ४ विश्वको नम्बर एक गायन रियालिटी सोको नेपाल संस्करण ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२’ लाई युनाइटेड सिमेन्ट्सले स्पोन्सर गरेको छ । हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने तयारीमा रहेको द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२ को टाइटल स्पोन्सरमा युनाइटेड सिमेन्ट्स अनुबन्ध गरेको हो । नेपालकै इतिहासमा यूनाइटेड सिमेन्ट्स नै प्रथम स्वदेशी ब्राण्ड हो जसले यति ठूलो तथा विश्व चर्चित गायन रियालिटी शोमा टाइटल..
पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई एक्शन स्पोर्ट्सको साथ, सह–प्रायोजन गर्न सम्झौता
काठमाडौं, ०३ असार । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) ले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०७५ लाई डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले सह–प्रायोजन गर्ने भएको छ । डिस मिडिया नेटवर्क र एनएसजेएफबीच गतसाता नै मुख्य सह प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । नेपाली खेलकुद क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डको रुपमा रहेको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको लागि एनएसजेएफले डिस मिडियासँग लगातार नवौं वर्ष सहकार्य..
काठमाडौं महानगर र नविल बैंकबीच ट्राफिक आइल्याण्डहरुको सौन्दर्यकरणका लागि सम्झौता
काठमाडौ, ३ असार । नविल बैंक लिमिटेड तथा काठमाडौं महानगरपालिकाबीच राजधानीका सडक सुन्दर पार्ने सम्बन्धमा विशेष सम्झौता सम्पन्न भएको छ । गतसाता एक बिशेष समारोहबीच काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नयाँ सडक गेट अगाडि पूर्वतर्फको र राष्ट्रिय सभागृह गेट अगाडि पश्चिम तर्फको सडकका ट्राफिक आइल्याण्डहरुमा एरोपोनिक प्रणालीबाट फूलका १२ वटा स्तम्भहरु जडान गर्ने विशेष सौन्दर्यकरण सम्झौता भएको हो । आधुनिक प्रविधिको एरोपोनिक प्रणालीबाट फूलको स्तम्भहरुमा..
सिभिल बैंक लिमिटेडको नयाँ शाखा लाहान र शिवसताक्षीको दुधेमा
लाहान, २९ जेठ । सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा लाहान नगरपालिकाको लाहानमा र शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरुका बीच लाहान नगरपालिकाको मेयर मुनी साह सुडीले तथा शिवसताक्षी नगरपालिकाको मेयर चन्द्र कुमार शेर्माले गर्नुभयो । शाखाको उद्घाटन समारोहहरुमा प्रमुख अतिथि लगायत पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, सिभिल बैंक प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु सो क्षेत्रका राजनैतिक ब्यक्तित्वहरु, उद्योगी,..
चीन सरकारसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको हुवावेको दाबी
एजेन्सी, २८ जेठ । अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई सरकारबाट चलाएको दावी गरिरहँदा हुवावेले भने सरकारसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको जनाएको हो । कम्पनीका अनुसार चिनियाँ सरकारबाट कुनै पनि अवाञ्चित गतिविधि गर्न निर्देश नभएको समेत दावी गरेको छ । अमेरिकाले हुवावेबाट अमेरिकामा जासुस भएको भन्दै उत्पादन गरिएका मोबाइल विक्रीमा प्रतिबन्ध गरेपछि हुवावेले छानविन गर्न सकिने समेत जनाएको छ । कुनै प्राविधिक त्रुटि त्यसको भागेदारी बन्ने..
सिभिल बैंक लिमिटेडको नयाँ शाखा धनुषाको ढल्केबरमा खुल्यो
धनुषा, २६ जेठ । क वर्गको वाणिज्य बैंक सिभिल बैंकले धनुषाको ढल्केबरमा आफ्नो नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकको उक्त शाखाको उद्घाटन मिथिला नगरपालिकाका मेयर हरि नारायण महतोले गर्नुभएको थियो । उक्त शाखाको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा मिथिला नगरपालिकाका मेयर हरि नारायण महतो, सिभिल बैंक प्रदेश नं २ का प्रदेश प्रमुख दिपक कुमार श्रेष्ठ लगायत सो क्षेत्रका राजनैतिक ब्यक्तित्वहरु, उद्योगी,..
स्पोर्टी अवतारमा भित्रियो अप्रिलियाको स्ट्रोम १२५, यस्तो छ बजार मूल्य !
जेठ २३, काठमाडौं । नेपाली बजारमा नयाँ स्पोर्टी अवतारमा अप्रिलियाको स्ट्रोम १ सय २५ स्कुटर भित्रिएको छ । अप्रिलियाको नेपालका लागि आधिकारीक बिक्रेता दुगड ब्रदर एन्ड सन्स्ले अप्रिलियाको नयाँ स्कुटर बिहिबार सार्वजनिक गरेको हो । यसैबीच कम्पनीले आजदेखि नै स्ट्रोम १२५ स्कुटर बिक्री सुरु थालेको छ । सो अवसरमा दुगड गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक विवेक दुगडले यस्तो फिचरमा अन्य कुनैपनि कम्पनीले स्कुटर बजारमा..
नेप्सले पायो विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको अनुमति
काठमाडौं, २० जेठ नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स) ले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको अनुमति पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भुक्तानी सम्वन्धि कार्य गर्ने संस्था संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ बमोजिम नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स) लाई बिद्युतीय कार्डहरुको सञ्जाल र भुक्तानी स्वीचको कार्य गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागले उत्तः अनुमति दिएको हो । नेप्स, विभिन्न बैंक..
अमेरिकाले कालो सूचीमा राखेपछि हुवावेले अमेरिकी नागरिकलाई जागिरबाट निकाल्यो
काठमाडौँ, १९ जेठ अमेरिकाले कालो सूचीमा राखेपछि चिनियाँ टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी हुवावेले अमेरिकी नागरिकलाई जागिरबाट निकालेको छ। फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकाका अनुसार केही साताअघि नै हुवावेको केन्द्रीय कार्यालय सेञ्जेनमा काम गर्ने अमेरिकी नागरिकलाई जागिरबाट निकालेको हो। हुवावेका प्रमुख रणनीतिक आर्किटेक्ट दांग वेनसुवानलाई उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विभागमा कार्यरत थुप्रै अमेरिकी नागरिकलाई दुई साताअघि नै फिर्ता पठाइएको उल्लेख गरेको छ। हुवावेले आफ्ना कर्मचारीलाई अमेरिकीहरूसँग..
सिभिल बैंकको नयाँ शाखा झापाको सुरुङ्गामा !
झापा, १५ जेठ “समृद्धिको लागि सिभिल बैंक” भन्ने नाराका साथ अगाडी बढेको सिभिल बैंकले झापा जिल्लाको सुरुङ्गामा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । कन्काईमा बैंकको आवश्कता महसुस गरेर सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा स्थापना गरेकोमा कन्काई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र कुमार पोखरेलले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । सो शाखाको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपाललाई समृद्धि तर्फ लैजान हामी सबैले नेपाल सरकारले जस्तै आफ्नो ब्यक्तिगत बजेट बनाई आफ्नो सम्भाव्य..
काठमाडौँ, ७ जेठ स्मार्टफोन निर्माता हुवावे टेक्नोलोजिजका लागि गुगलका तर्फबाट एन्ड्रोइडको प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ । युएस कमर्स डिपार्टमेन्टले उक्त प्रतिबन्धको आदेश केही समयका निम्ति स्थगन गरेको हो । हाललाई अमेरिकाले वर्तमान ग्राहकहरूलाई सहज पार्ने उद्देश्यले ह्वावेईविरुद्ध प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कडा नियम लागु गर्ने कार्य तीन महिनाले पछि सारेको छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा ‘युएसका कम्पनी अब चिनियाँ कम्पनी हुवावेका साथ बिजनेस गर्न सक्दैन’..
काठमाडौं, ६ बैशाख । नेपाल लाइफको चुक्ता पूँजी जीवन बीमा क्षेत्रकै सर्वाधिक रु. ५,४९,९६,१६,०८१०/— पुग्नेभएको छ । कम्पनीले वितरण गर्ने बोनश शेयर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी जीवन बीमा क्षेत्रकै सर्वाधिक हुन लागेको हो । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७६ जेष्ठ ४ गते शनिबार, बीरगंजमा सम्पन्न उन्नाइसौं बार्षिक साधारण सभाद्वारा शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा प्रति शेयर रु.२३.५०..
लन्डन, ३१ बैशाख बेलायती दूरसञ्चार कम्पनी भोडाफोनले वार्षिक नोक्सानी करिब ७ अर्ब ६० करोड युरो पुगेको मङ्गलबार जनाएको छ । वित्तीय वर्ष सन् २०१८–२०१९ मा कम्पनीको नाफामा पनि कमी आएको भोडाफोनले जनाएको छ । खासगरी भोडाफोन इन्डियाको शेयर बिक्री गरेपछि कम्पनीको घाटा बढेको देखिएको छ । भोडाफोन इन्डिया पछिल्लो वर्ष आइडिया सेलुलरसँग गाभिएको थियो । ..
काठमाडौँ, २५ वैशाख नेपाल भरी १५ वटा सामसुङका सेवा केन्द्रहरु भएको आइएमएस केयरले आफ्नो १६ औं सेवा केन्द्र लक्ष्मीकम्प्लेक्स, पुरानो भन्सार रोड, धनगढीमा सुरु गरेको छ । सेवा केन्द्र बिस्तार गरेको अवसरमा आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले विभिन्न स्थानमा, विशिष्ट सेवा प्रदान गर्नु नै मुख्य उद्देश्य भएको बताए । प्रत्येक सेवा केन्द्रको स्थापनाले बिक्रि पछिको सेवा प्रदान गर्ने दायित्व पूरा गरेको उनको भनाई..
काठमाडौं, २३ बैशाख । आई.एम.एस्. ग्रुप आफ्नो स्थापनाको २७ औं वर्षमा सफलताका साथ प्रवेश गरेको छ । विश्वकै नम्बर १ मोबाइल फोन ब्राण्ड सामसुङ र कोरियन गाडी स्याङ्योङ मोटर्स तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरुका नेपालस्थित एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता, आई.एम.एस्. ग्रुप अन्तर्गत २० बढी कम्पनीहरु रहेका छन् । आई.एम.एस्. ग्रुपले २०७६ वैशाख २० गते राजधानीको होटल अन्नपूर्णमा २७ औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । उक्त..
काठमाडौं, २२ बैशाख । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडका ग्राहकहरुले अब बिराट मेडिकल कलेज र बिराटनगर अस्पतालमामा उपचार गराउँदा विशेष छुट पाउने भएका छन् । गत साता जनता बैंक र बिराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल तथा बिराटनगर अस्पताल प्रालिबीच स्वास्थ्य उपचार सेवामा छुट सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो । विशेष गरी प्रदेश नं. १ का ग्राहकको सुविधालाई मध्येनजर गरी दुबै अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको बैंकले विज्ञप्तिमार्फत..
लन्डन, २१ बैशाख चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेलाई तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवा (फाइब जी) को सीमित अनुमति दिइएको बारेमा भएका खुलासाहरु फौजदारी अपराध नरहेको बेलायती प्रहरीले स्पष्ट गरेको छ । प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले बुधबार यही आरोपमा रक्षामन्त्री ज्याभिन विलियम्सनलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो । बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अप्रिल २३ मा बसेको बैठकमा भएको निर्णय सार्वजनिक हुनुमा प्रधानमन्त्री मेले रक्षामन्त्रीमाथि दोष लगाउनुभएको थियो । परिषदमा..
काठमाडौं, २० बैशाख । सिभिल बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकवर्गलाई सहुलियत प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित ब्लू क्रस हस्पिटल र मेडीसिटी हस्पिटलसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको छ । बैंकले ब्लू क्रस हस्पिटलसंग बैशाख १७ गते मंगलवार र मेडीसिटी हस्पिटलसँग बैशाख १९ गते यस्तो सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापत्रमा सिभिल बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ र ब्लू क्रस हस्पिटलको तर्पmबाट कार्यकारी ब्यवस्थापन समिति सदस्य सचिव रजत..
काठमाडौं, १६ बैशाख । जनता बैंक र भाटभटेनी मनि ट्रान्स्फर (बिएमटी)बीच रेमिट्यान्स कारोवार सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुंवर क्षेत्री र भाटभटेनी समूहद्वारा संचालित बिएमटीका प्रबन्ध संचालक राजनकुमार अमात्यले हस्ताक्षरण गर्नुभयो । सम्झौता बमोजिम “भाटभटेनी रेमिट” मार्फत पठाइएको अन्तरिक तथा बाह्य रेमिट्यान्सहरु जनता बैंकको देशै भरी छरिएका १ सय २९ शाखा तथा ५० शाखा रहित..
टोकियो, १३ बैशाख । जापानको विद्युतीय सामग्री उत्पदक कम्पनी सोनीको आम्दानी लगातार दोस्रो वर्ष वृद्धि भएको छ । खासगरी अनलाइन खेल र अरु मनोरञ्जनात्मक व्यवसायमा लगानी गरेका कारण आम्दानी बढेको कम्पनीले जनाएको छ । मार्चको अन्त्यसम्म वार्षिक खूद नाफा ८ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (९१६ अर्ब जापानी येन) पुगेको छ । सञ्चालन नाफामा करिब २२ प्रतिशत वृद्धि भई ८९४ अर्ब जापानी..
काठमाडौं, १३ वैशाख । नेपालका लागि टिभीएस मोटरसाइकल तथा स्कूटरको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले हालै देशभरका डिलरहरुको एक भेला आयोजना गरेको छ । १ घर १ टिभीएस नारा दिइएको उक्त भेलामा टिभीएस मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरुको देशभरका ९८ डिलरहरुको सहभागीता रहेको थियो । यही वैशाख ४ देखि वैशाख ९ सम्म भैरहवा स्थित टाइगर रिसोर्टमा आयोजना गरिएको उक्त भेलाको उद्देश्य १ घर..
Results 270: You are at page4of 9